သင်၏ Android ပေါ်တွင်ပြိုပျက်နေသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များ၏ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
Android ဆော့ဝဲလ်တွင်သုံးသောအရာများရှိသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်ဒါတွေဟာ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအစမှာကောလုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလစ်ကိုတုန့်ပြန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိရိယာကိုတကယ့်ငရဲပြည်အဖြစ်သို့ရောက်အောင်လုပ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားများစွာကုန်ကျသည်။
လာမယ့်ပို့စ်တွင်သင့်အားအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြသပါမည် ဤအကျိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြtheနာကိုဖြေရှင်း သို့မဟုတ်သူတို့သည်ပထမဆုံးနေ့၊ လုံးဝအခမဲ့ application တစ်ခုမှတဆင့် Android ဗားရှင်းအားလုံးအတွက်တရားဝင်ဖြစ်ခြင်း၊ တစ်ကြိမ်တည်းနှင့်အလုံးစုံဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းသို့မရောက်ရှိပါ။ ကျိုးပဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်, သူတို့ကိုလွန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန် Android နှင့်အတူဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ရန်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုသင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိချင်ရင်ဒီ post ကိုဆက်ဖတ်ဖို့အကြံပေးပါမယ်။
1 Android Terminal များတွင်ပြိုကွဲနေသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များ၏ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
2 Button ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာဘာလဲ။
Android Terminal များတွင်ပြိုကွဲနေသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များ၏ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
မသန်စွမ်း ကျိုးပဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များ၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပါ Android လည်ပတ်မှုစနစ်ရှိသည့်ဆိပ်ကမ်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တရား ၀ င်အပလီကေးရှင်းဖြစ်သောဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်း Play စတိုးကိုအခမဲ့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်လုံလောက်သည်။ ကယ်တင်ရှင်ခလုတ်စာသားအင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပါယ်များမှဘာသာပြန်ထားသောသော, ကယ်တင်ရှင်ခလုတ်.
ကယ်တင်ရှင်ခလုတ် ၎င်းသည် virtual keyboard တစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ Android terminal ရဲ့ touch screen မှာaလုပ်ထားတာကိုဆိုလိုတာပါ Floating and hidden icon, အပလီကေးရှင်းချိန်ညှိမှုများမှယခင်ကစီစဉ်ထားခဲ့သောinရိယာတွင်ဘေးချင်းလျှော။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါ်ဆိုမှုကိုဖြေကြားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင် ROOT, အစပိုင်းတွင်လိုချင်သောအရာ၊ မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသောခလုတ်၊ လျှို့ဝှက်ထားသောဤရေပေါ်ဝစ်ဂျက်မှကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ပင်မစာမျက်နှာ, ခလုတ်ကို မကြာသေးမီကအက်ပ်များ, ဝင်ရောက်ခွင့် app အံဆွဲ, button ကိုဝင်ရောက်ခွင့် စွမ်းအား, ဝင်ရောက်ခွင့် အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှု အဖြစ်ဝင်ရောက်ခွင့် နောက်ကျောခလုတ်ကို သို့မဟုတ် ကင်မရာခလုတ်.
ထို့အပြင် application ၏အတွင်းပိုင်း configurations များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော parameters များကိုအသုံးချနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအစေခံပါလိမ့်မယ်ကြောင်း parameters တွေကို keypad layout ကိုပြောင်းပါ အကြောင်းအရာများသို့မဟုတ်အရေခွံများမှတဆင့်, floating icon ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှု, ထိုအတူတူပင်အရွယ်အစားသို့မဟုတ်အထက်ဖော်ပြပါ virtual ခလုတ်ဖွင့်လှစ်ရန်အနေအထားနှင့်အထိခိုက်မခံareaရိယာ။
ဒုတိယအခွင့်အလမ်းရှိသူအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည်ဖြစ်သော Android Apps စတိုးတွင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ကျိုးပဲ့လွယ်သောခလုတ်ခုံဖြင့် Android terminal များ သို့မဟုတ်ပါကတုန့်ပြန်သကဲ့သို့မတုံ့ပြန်ကြောင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android application များ » သင်၏ Android ပေါ်တွင်ပြိုပျက်နေသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များ၏ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
ငါ piecontrol ကို install ရှိသည်, အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းသော
HTC One Mini2ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည်
Samsung Galaxy Note4ကိုကြေငြာချက်အသစ် ၂ ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်